Biby katsaka - sakafo ho an'ny menaka sy ronono. Ahoana no handraisan-tsiram-bozaka mofomamy ao anaty multifariate sy ao amin'ny oven?
Pumpkin porridge - 8 fomba niavaka mba hanaparitahana sakafo tsotra
Daty, ny an'arivony efa misy, no nanavotra olona maro tsy hanoanana, nanamboatra ny latabatry ny adala sy ny papango mahantra - tsy nahalavo ny lazany hatramin'izao. Amin'ny voankazo na serealy, voamaina na boaty - masira mavomavo mamirapiratra dia afaka mandray ny feo manitra ary mora lasa dessert mamy na maina.
Ahoana no handrafetana katsaka?
Ny menaka masirasira, ny tsiambaratelo dia tsotra sy manerantany, dia nanjary ohatra amin'ny sakafo mahasalama sy mahasalama izay tsy mitaky fahaizana manokana amin'ny fihinanana. Ny lovia, noforonin'ny sakafo na ny famonoan-tena ary maneho volo matevina, dia manana ny fahaizanao miaraka amin'ny vokatra mahasoa sy tsotra, izay ahafahanao manova ny sakafo isan'andro . Ataovy azo antoka ny vokatra azo mba hahazoanao sakafo matsiro azonao, raha manaraka ny fitsipika fototra ianao:
Misafidiana vokatra iray miaraka amin'ny hena mamy sy mamy ary tsy misy hoditra.
Ny fanesorana shell iray dia azo atao mandritra ny roa minitra raha manapaka izany ianao ary mihazona ilay vokatra mandritra ny 3 minitra ao amin'ny mikrô.
Ny kolosely voapoizina dia nopetahana tsikelikely mba hanatsarana ny dingana arahina.
Haka 25 minitra ho an'ny hoso-doko vita amin'ny vilany na kitapo mba hahazoana mangatsiaka malefaka, avy eo mifangaro amin'ny zava-manitra na mifangaro amin'ny voankazo, dia hanjary ho fery mangotraka.
Tavoahangy kambana amin'ny ronono
Milanja papyrus milanja - loharanon-tsakafo tena tsara, manambara tanteraka ireo endri-javatra mahasoa ny melons sy ny koveta. Ny fisian'ny ronono ao amin'ny lovia dia mampivelatra ny endriky ny carotene ary manova izany ao amin'ny vatana ho vitaminina vitaminina A, izay tsy misy afa-tsy raha misy tavy biby na legioma.
ronono - 1, 2 litatra;
cinnamon dia fingotra.
Alohan'ny handahanao ny valala volomparasy, alaviro ary atsipazo ao anaty boaty kely ny plastika.
Apetaho ao anaty ronono mafana sy mikarakara 40 minitra izy ireo mandra-pahafeno tanteraka.
Atsofohy ao anaty fitoeran-drano ny rano ary esory amin'ny masirasira ny masony.
Fehezina miaraka amin'ny zava-manitra sy manompom-bary mitahiry ronono miaraka amin'ny ronono vera ampiasaina mandritra ny sakafo.
Mofo kesika eny ambony rano
Ny menaka masira tsy misy fampiasana voankazo amin'ny fototra rano dia toa tsy ho menaka sy hafanana rehefa mampiasa fanafody toy ny voanjo sy voankazo maina. Tsy manampy tononkalo fotsiny izy ireo fa manatsara ny tsiron'ny vokatra. Ny kalozia sy ny sakafo amin'ny sakafo dia tena mahasalama tokoa ary raha manompo azy amin'ny sakafo maraina dia afaka mitaky herinaratra izany.
ravinkazo - 100 g;
voanio katsaka - 50 g;
bozaka - 50 g;
menaka - 40 g.
Alohan'ny handahanao ny lava-pamokarana, alao ny ravin-tsakafo, alao amin'ny rano mafana mandritra ny antsasak'adiny sy ny voany, alofenao amin'ny blower.
Hetezo ny nofo ary hikolokolo mandritra ny 20 minitra.
Manaova drafitra ary mamelà ny fifangaroana.
Fotoam-bary, voanjo, voanio ary voa.
Mpanao mofo kesika misy manga
Ny fikarakarana ny menaka masira dia ho fomba mahafinaritra sy ilaina ao amin'ny fianakaviana miaraka amin'ny ankizy kely. Tena mahavoky amin'ny totozy malefaka sy malefaka, trano tsara tarehy vita amin'ny vitaminina amin'ny vanin-taona ririnina, amin'ny tsy fisian'ny legioma sy voankazo vaovao. Ny menaka mandevy ho an'ny ankizy dia matetika mahandro miaraka amin'ny semolina, mampitombo ny sira ho an'ny sakafo.
Pulp masaka - 250 g;
ronono - 600 ml;
siraolina - 80 g;
mofo voaloboka maina.
Ny nofo dia mamotipotika amin'ny ravina ary mahandro amin'ny ronono mandritra ny 10 minitra.
Ataovy ao anaty mangotraka, siramamy ary atsangano, mandrava ny habetsahan'ny volombava.
Andramo ary asio emboka manitra.
Mpanao mofo kesika miaraka amin'ny menaka dia karazana kiziniana rosiana. Eo am-pisalasalana ny fanandramana dia misy faniriana ny handrahoina ao anaty lafaoro, izay hiaro ny hatsarana sy ny fofona maimai-masaka araka izay tratra, ary hanome ny foitra mahamay. Aza atao tsinontsinona io safidy io, satria io no hany fomba ahazoany ireo vitamina madio ao anatin'ny sira.
jono - 2, 5 kg;
manitra - 300 g;
Peel ary aforeto ny voamadinika.
Aparitaho amin'ny tavy vita amin'ny baka, alatsaho ao anaty rano ary makà 200 degre amin'ny antsasak'adiny.
Manaova ranom-boasary, alatsaho ny rano mangotraka mandritra ny roa minitra mba hanafoanana ny alahelo.
Mofomamy ny sisin'ny ambim-bary, atsangano miaraka amin'ny croup, alatsaho ao anaty ronono ary makà 40 minitra ao anaty oven amin'ny 170 degre.
Pumpkin papier miaraka amin'ny vary - recipe
Ny menaka masira Pumpkin-rice dia safidy hafa amin'ny fampiasana ny toetra manerantany ny melons sy ny koveta mifangaro miaraka amin'ny croup malaza. Noho ny fotoan-tsarotra, maro ireo mpikarakara vehivavy no maniry io safidy io noho ny firaiketam-boay miloko sy malemy. Fomba mahafinaritra: manamaivana ny habeny, afaka mamonjy sakafo maraina ny sakafo.
ronono - 350 ml;
vary - 120 g;
dibera - 50 g.
Ampiasao ireo singa voalohany ao amin'ny lisitra, arotsaka ny ampahany amin'ny vokatra mandritra ny iray kilaometatra isan'ora.
Mofomamy ny ronono, mamafy siramamy sy vary ary mamony amin'ny hafanana ambany, tsy misy rivotra, antsasak'adiny.
Mofomamy mofomamy mandevona, mameno ary manompoa.
Tavoahangy mandro miaraka amin'ny katsaka
Mamy sakafo kalsioma ihany koa ny sakafo matsiro, indrindra fa ny olona mijery ny sakafony. Marina izany - tsy midika ho lafo, ary manamarina izany. Ny vokatra ara-tsakafo ara-bola dia afaka mitondra ho azy ireo sakafo mahavelona ao anatin'ny adiny iray maily, mameno ny takelaka misy mpankafy telo amin'ny fahasalamana ara - pahasalamana .
masomboly katsaka - 250 g;
voankazo voajanahary - 100 g;
Esory ny vilany ao anaty vilany iray, alao ny ronono sasany ary andokafao 10 minitra eo ho eo, ary sasao amin'ny blender.
Ao anaty fitoeram-pokontany iray, alao 5 minitra ny vary.
Ampifandraisina ireo fitaovana ireo, ampio ny sisa amin'ny rano ary atokoy azy mandritra ny fotoana fohy.
Pumpkin porridge ao amin'ny multivariate - recipe
Ny fahaiza-manaon'ireo mpihira marobe dia fantatra amin'ny tompony: ampy ny mifidy singa, mitandrina ny ampahany, mametraka ny fomba ary miandry ny sakafo eo amin'ny latabatra. Alohan'ny handrafetanao korontam-bozaka, dia tokony hividy miorim-panafody ianao, miora, manadio ny mamy miaraka amin'ny sira, mipetraha ao anaty siramamy, ary mametraka ny asany, miala ny lakozia.
vary - 180 g.
Ny ampahany lehibe amin'ny singa fototra napetraka ao amin'ny tavoahangy multivarki, manondraka ny vary voaloto, manondraka ny crème, ampio tantely, mifangaro ary sira.
Misafidiana ny "Kasha" ary ny fotoana 40 minitra ary ny papango matsiro mahavelona dia hiseho araka ny fomba fanoratra.
Mpanao mofo kesika ao anaty vilany iray ao anaty lafaoro
Mitondra karazan-tsakafo mahavelona sy ara-teknika mahomby ny menaka masira ao anaty lafaoro . Tsy tsiambaratelo fa ny fikarakarana ny fatana dia tsy mitoetra fotsiny ny toetra tsara indrindra amin'ny lovia iray, fa mitazona ihany koa am-pahamendrehana, tsy manelingelina ny rafitra. Amin'ny fampiasana ny "renibeny" fomba fanao ary mandany tsy mihoatra ny antsasak'adiny, dia afaka manamboatra sakafo fihinana telo miaraka amin'ny alàlan'ny aviavy.
aviavy - 150 g;
Garn'ny voanio - 50 g.
Ny singa fototra ao anatin'ilay lisitra dia voasesika ary voaomana mandritra ny 10 minitra.
Atsofohy ao anaty vilany ny nofo, arotsaho ny tavy ary atsipazo ao anaty crème.
Manao 20 minitra amin'ny 180 degre.
Hena miaraka amin'ny tantely, mamafy voanio poma sy ampongabendanitra.
Ahoana ny handravahana kurik - fomba tsotra?
Pasta misy moustels
Karôpao sy salady cucumber
Salady miaraka amin'ny pistachios
Tazo voatoka miaraka amin'ny voatabia
Ny fampakaram-bady ny ampakarina dia manao volamena fotsy
Aiza no mitombo ny ahitra?
Fihetseham-po tamin'ny andro voalohan'ny fitondrana vohoka
Toeram-pialamboly an-tendrombohitra any Rosia
Ahoana no handresena ny fahaketrahana sy hianatra hankafy fiainana?
Ahoana no handoavana lanja mandritra ny tapa-bolana?